News 18 Nepal || निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट जोगिन डा. पाण्डेले दिए यस्ता सुझाव
काठमाडौं । तीन हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा बुधबार रातिदेखि खुकुलो हुने भएपछि जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले सरकारले ‘बल’ नागरिकका हातमा दिएको र अब आफैँ सुरक्षित हुनुपर्ने बताएका छन् । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णयलाई स्वागत गर्दै जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेले सरकारको यो निर्णय नागरिकको पक्षमा भएपनि कोरोना संक्रमण घटेको भनेर कसैले बुझ्न नहुने बताए ।
‘निषेधाज्ञा खुलेसँगै संक्रमणको जोखिम अझै बढ्छ । घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य सही तरिकाले मास्क लगाउनै पर्यो, दूरी कायम गर्नेपर्‍याे,’ डा.पाण्डेले भने, ‘सरकारले बल हाम्रो कोर्टमा फालेको छ । अब जोगिन हामी आफैँले विशेष सतकर्ता अपनाउनै पर्छ ।’ उनले घरबाहिर जति कम समय बितायो त्यति सुरक्षित भइने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेका छन् ।
कामबाट घरमा आएपछि मास्क, चस्मा, झोला, बाहिरी कपडा आदिलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने, नुहाउने अनि मात्र परिवारसँग घुलमिल हुने बानीको विकास गर्न उनको सुझाव छ । उनले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगी भएका व्यक्तिहरुलाई जोगाउन सकेसम्म घरमा छुट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘कुन व्यक्ति संक्रमित छ भनेर अनुहार हेरि चिनिँदैन । हरेक व्यक्तिसँग सुरक्षित ब्यबहार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काममा जाँदा पानी, खाजा घरबाट लिएर जाने बानी बसाल्नुपर्यो । व्यवसायीले व्यक्तिगत दूरी सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, झ्यालढोका खोलेर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्‍याे ।’
उनका सुझाव यस्ता छन्;
बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरु घरभित्र बस्ने । सकभर घरभित्र पनि छुट्टै कोठामा बस्ने । काम गर्न बाहिर जाने व्यक्तिसंग दुरी कायम गर्ने । कुरा गर्दा मास्क लगाउने । मर्निंग वाक वा इभिनिंग वाक घरमै गर्ने । खुल्यो भनेर बिनाकाम घरबाहिर नजाने । घरबाहिर जति छोंटो समय बितायो त्यति धेरै सुरक्षित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । घरबाहिर निस्कँदा अनिबार्य रुपमा सहि तरिकाले मास्क लगाउने ।
सम्भव भएसम्म २ मिटरको दुरी कायम गर्ने । भीडभाडमा नजाने, भीडभाड नगर्ने । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा मास्क तथा पंजा लगाउने । स्यानिटाइजरले हात सफा गरिरहने । बिशेष सतर्क हुने । हरेक पसलले व्यक्तिगत दुरी कायम हुनेगरि काउन्टरको ब्यबस्थापन गर्ने । मास्क नलगाएका ग्राहकलाई मास्क दिने । सबैको लागि ठूलो स्यानिटाइजर राख्ने । झ्यालढोका खोलेर भेन्टिलेसनको प्रत्याभूति गर्ने ।
सकभर हरेक पसलमा परल मुल्यमा सस्तो मास्क तथा स्यानिटाइजर बिक्रीवितरण गर्न राख्ने । ग्राहक ब्यबस्थापन कुशल ढंगले गर्ने । भीडभाड नगराउने । पसल र हरेक सामान संक्रमणरहित बनाउने । चियापसल, कफीसप तथा पसलमा साथीहरु संगै बस्ने, गफ गर्ने, चुरोट खाने, सुर्ती मोलेर बाँड्ने, थुक्ने जस्ता काम नगर्ने ।
कुन व्यक्ति संक्रमित छ, कुन व्यक्ति छैन भन्ने अनुहार, सम्बन्ध, शिक्षा, पद आदि हेरेर थाहा हुँदैन । हरेक व्यक्तिसंग सुरक्षित ब्यबहार गर्ने । सामान किन्दा धेरै छान्ने काम नगर्ने । किनमेलको लिस्ट घरमै बनाएर जाने । पसलहरुमा एकदम छोंटो समय बिताउने । जति लामो समय पसलभित्र वा बसभित्र बस्यौं, त्यति नै जोखिम हुन्छ ।
सकभर तरकारी बजारबाट तरकारी नकिन्ने । घर नजिकको पसलबाट किन्ने । बसेर छान्ने, छाम्ने काम नगर्ने । डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा सपिंग मलमा पर्याप्त भेन्टिलेसन हुँदैन । तसर्थ आफुले बनाएको लिस्ट अनुसार फटाफट किनेर बाहिरिने । लामो समय नबिताउने । भोको, मास्क किन्न नसकेको तथा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सक्दो सहयोग गरेर पुन्य कमाउने ।
कमाउने कुरा पैसासंग मात्र जोडिएको हुँदैन । पुण्यभन्दा ठूलो कमाइ अरु केहि हुँदैन । बैंक, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत, बिद्युत आदि जनसम्पर्कका कार्यालयले हरेक बैंकका हरेक शाखाबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने ब्यबस्था मिलाउने । क्यासलेस लेनदेनलाई प्रेरित गर्ने । टाइम कार्ड लागु गरेर भीड नियन्त्रण गर्ने । फाइललाई डिजिटल बनाउने ।
रुघाखोकी, ज्वरो वा अन्य स्वास्थ्य समस्या भए घरमै आराम गर्ने । बिरामी हुँदा आफुले अरुलाई सार्ने मात्र होइन अरुको संक्रमण आफुलाई छिटो सर्ने खतरा पनि हुन्छ । सकभर पानी, खाजा घरबाट लिएर जाने वा सफा र झ्यालहरु धेरै भएको रेस्टुरेन्टमा सुरक्षित रुपमा खाने । आफ्नो पसल जति धेरै सफा गरिन्छ, जति धेरै मापदण्ड पुर्याएर संचालन गरिन्छ तथा जति धेरै आफ्ना कामदारलाई सफा बनाइन्छ, त्यति धेरै चल्छ । यो सुत्र सबैले अपनाउने ।
कामबाट घरमा आएपछि मास्क, चस्मा, झोला, बाहिरी कपडा आदिलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने, नुहाउने अनि मात्र परिवारसंग घुलमिल हुने । ग्राहकलाई सुरक्षित बनाउनु हरेक व्यवसायीको दायित्व हो । हामी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अबलम्बन गर्यौं भने संक्रमण घट्दै जान्छ । संक्रमण घटेपछि लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुँदैन । हामी पनि सुरक्षित हुन्छौं ।